Voka-pifidianana: nahary fitoriana 212 ny HCC | NewsMada
Voka-pifidianana: nahary fitoriana 212 ny HCC
“Eo amin’ny 212 eo ny fitoriana voaray eto amin’ny HCC. Efa niasa hatrany ny HCC hatramin’izay, nanao ny fanamarinana rehetra isaky ny birao fandatsaham-bato tsirairay avy ary isaky ny kandidà tsirairay avy. Aza hadinoina izay. Tsy misy miangana ato amin’ny HCC ny zavatra rehetra.” hoy ny talen’ny kabinetran’ny HCC, Ratsarazaka Ratsimandresy Andrianirina, teny Ambohidahy, omaly. Hatao eny amin’ny lapan’ny HCC, Ambohidahy, ny 28 novambra amin’ny 10 ora maraina, ny fanambarana izany amin’ny fomba ofisialy.
Efa nisy hatrany fanerena
Efa nisy hatrany fanerena eny amin’ny HCC. “Amin’ny maha andrimpanjakana anay: henoinay ny fanerena sy izay tenenin’ny olona, fa tsy afa-kanao ankoatra an’izay izahay”, hoy izy. Tsy hoe vao izao ry zareo no miasa, fa efa nanomboka niasa raha vao nahazo ny valopy mirakitra ny antontan-taratasim-pifidianana avy tany amin’ny Ceni.
Manana ny firaketana an-tsoratra (PV) ny Ceni, manana ny azy koa ny HCC. Samy mikirakira ny azy, araka ny nambarany. Tsy mitovy koa ny “logiciel” ampiasaina, fa hafa ny an’ny HCC. Ho hita eo rehefa avy eo hoe: inona ny vokatra havoakan’ny HCC?
Tsy hanova ny fomba fiasany ny karazana fanerena
“Tsy hisakana izay asa masina izay ny fanodinkodinan-tsaina, ny tsaho, ny faniratsirana, ny fanalam-baraka, ny fanelezana vaovao tsy marina sy ny hafa.” Izay kosa ny fanambaran’ny HCC tamin’ny “site-web”-ny, omaly ihany. Mba hahazoana manaja ny tena fahamarinana amin’ny fandatsaham-bato ny asa rehetra. Ho an’ny HCC, ambony indrindra mihoatra ny zavatra rehetra ny fanajana ny safidin’ny mpifidy.
Hatramin’ny nandraisana ny antontan-taratasy avy amin’ny SRMV na ny Ceni, ny 10 novambra, nanomboka ny fanamarinana ny ny firaketana an-tsoratra isaky ny birao fandatsaham-bato tsy misy ankanavaka ny HCC, araka ny fanambarana.
Dinihina ho amin’ny fanitsiana azy ny fahadisoana sy ny tsy fanarahan-dalàna hafa. Amin’ny tsy fanarahan-dalàna lehibe, mangataka ny antontan-taratasim-pifidianana famenony ny HCC hatramin’ny fangatahana ny biletàm-pifidianana mba hahazoana manao ny fanisam-bato vaovao.